घर र थर फेरेर विकास हुदैन
किरण चौलागाई शुक्रबार​, बैशाख ५ २०७७
मुलुकले सामाजिक सभ्यता र विकासको सम्बन्ध हुदैन भन्ने कुरा बुझेन । त्यसैले नमस्कार गर्ने चलनलाई विकासको वाधक ठान्यो । अंकमाल गर्ने सभ्यता विकास गर्याे । नेपाली पोषाक लगाउनु विकासको वाधक ठान्यो र विदेशी पोषाक लगाउने अभ्यास सुरु गर्याे । विहान बेलुका पाञ्चायन पुजा गर्नाले विकास नभएको सम्झिए र विदेशी धर्म संस्कृती भित्रायो । अब यो देशनै विकास नहुने खाल्को रहेछ भनेर अर्को देशलाई दिन वेर छैन । तिमिहरुको पनि त्यस्तै भयो । यो घरले व्यवसाय नफस्टाएको ठानेर अर्को घर वनायौं । सामान्य वल्व बाल्दा व्यवसाय फैलाएन भनेर महंगो वल्व वाल्यौ । ठुला व्यापारीको झैं खाने वस्ने प्रणालिको विकास गर्याै । तर व्यवसायमा यसको कुनै सम्बन्ध थिएन भाइ हो । खै यो समयनै यस्तै आएको त होला नि ।
( नयाँ वर्ष २०७७ साल लागे संगै विक्रम सम्वत हटाउने पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र नेतृ हिसिला यमीका अभिव्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका छन् । त्यसैको औचित्यलाई कथाका माध्यमवाट प्रष्ट्याउने हेतुले तयार गरिएको प्रतिकात्मक लेख )
भनिन्छ "खालि दिमाग सैतानको बास " ठीक त्यस्तै भयो । म दिमागलाई खालि राख्ने मान्छे त हैन तर परिस्थितिनै त्यस्तै वनेको थियो । विश्व बन्दाबन्दीको चपेटामा गुज्रिएको वेला मेरो दिमाग खालि वस्नु ठुलो कुरा थिएन । यहाँ धेरैको काख, कोख र पेट पनि रित्तै थिए ।
हामी व्यवसाय गर्छौँ , हाम्रो परिवारको खानदानी व्यवसायको आम्दानी केही वर्ष यता क्रमिक रुपमा गिरावट आईरहेको थियो । हाम्रो समस्याको जड भनेको आम्दानीको श्रोतमा भएको गिरावट थियो । हाल कोरोना भाइरसका कारण मुलुकनै बन्द भएपछि समय फुर्सदिलो भएको छ । फुर्सदको समयमा अर्थाेपार्जनको दरिलो आधार तयार गर्ने कि भन्ने एक प्रकारको मानसिकता विकसित भईरहेको थियो ।
अरुको तुलनामा हाम्रो परिवार ठूलो छ । बुवाहरु ४ जना हुनुहुन्छ । हामी सबै एकै परिवारमा बस्छौँ । यसको एउटै कारण परिवारको आर्थिक पाटो मजवुत हुनु नै थियो । बाबा र ३ जना काकाहरुलाई ३ वर्ष अघिवाट म पनि व्यवसायमा सहयोग गरिरहेको थिए । विगत १ वर्ष वाट ओरालो लागेको हाम्रो व्यापारले परिवार चिन्तित थियो । नहोस् पनि कसरी १८/२० जनाको परिवार पाल्नु पर्ने जो जिम्मेवारी व्यापारमै निर्भर थियो ।साँझको ७ बजेको हुनुपर्छ, सबै घरमै भएकोले खानपिन सकिएको थियोे । सदा झैँ काकाहरु संग म गफिदै थिए । बाबा आजकाल खाना खाए पश्चात् गफिन रुचाउनु हुन्न । सायद शरीर गल्दै गएर पनि होला ।
माईला काकाले प्रसंग उठान गर्नुभयो ।
माईला काका : हेर केटा हो, यो बन्दाबन्दीले उसैपनि चौपट भएको व्यवसाय झन चौपट हुनेभयो । अब अलि गम्भिर भएर ध्यान दिने समय आयो ।
साईला काका : आर्थिक पाटो मजवुत भएन भने सब चौपट हुन्छ माल्दाई, हामी कसरी व्यापारमा घाटा खाइरहेका छौ ? भन्ने बिषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भयो ।
कान्छा काका : कुरो चाहिँ साल्दाई संग मिल्दोजुल्दो नै हो मेरो पनि, तर कसरी पैसा कमाउने भन्ने बिषयमा लागौ न हामी हैन माल्दाई?
माईला काका : यो हाम्रो पुख्र्यौली व्यापार हो । नचल्ने व्यापार पनि हैन, अरुको चलिरहेकै छ । हाम्रो कहाँ नेर गल्ती भैरहेको छ पौल्याउन र्गाहो भो कान्छा । यो समस्याको जड पत्ता लगाउने हो भने व्यापारमा रिकभर हुन त टायम लाग्दैन ।
कान्छा काका : कुरो ठीक गर्नुभो माल्दाई , समस्याको जड पत्ता लगाउने हो भने व्यापारमा रिकभर हुन त टायम लाग्दैन । हामीले अरु सफल भएका व्यापारीहरुको नक्कल गर्न पनि हाचेनौं क्या माल्दाई, जसरी मादल बज्छ उसरी नाच्न लाग्यौ । यो एउटा प्रमुख कमजोरी भयो ।
साइला काका : कान्छाको कुरा पनि ठीकै हो माल्दाई, अरुको सफलताको कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई किन फलो नगर्ने ? यो कुरा मलाई पनि चित्त वुज्यो है ।
माईला काका : ल तिमिहरुको कुरा मैले मानँे, तर अरु कसरी सफल भए भन्ने कुराचाहीँ कसरी थाहा पाउने त? भने जस्तो सझिलो हुदैन नि ।
कान्छा काका : हैन माल्दाइ त्यति गाह्रो छैन । उनीहरुको जीवनशैली, रहनसहन, बसोबास, दैनिकीलाई अध्ययन गरौ न, कुरो पत्तो लागिहाल्छ नि । हैन त राजु ?
काकाले कुरो म तर्फ तेर्साउनु भयो ।
मैले भने : काकाले भनेको कुरामा म सहमत छु । यो ठाउँमा व्यापारीहरुको मुल्यांकन गरौँ, र हाम्रो गरौ त, कति फरक पाईन्छ । जैनारानको घर हेर्नुस् त कत्रो अलिसान छ । अनि हाम्रो यस्तो थोत्रो ।
माईला काका : के कुरा गर्छ यो राजु, घर र व्यापारको के सम्बन्ध छ र ?
कान्छा काका : हैन दाजु सम्बन्ध हुन्छ । ठुलो पार्टीले घर देखेरै पनि हाम्रो हैसियत वुज्छ र हामी संग डिलिङ गर्दैन । सोच जवसम्म ठूलो हुदैन तवसम्म प्रगति हुदैन । राजुको कुरा एकदम ठीक हो । पहिला हाम्रो सोच ठूलो बनाउ, व्यापार आफैं ठुलो हुन्छ ।
साईला काका : हो माल्दाई एउटा पोखरीमा पानी लिन जाँदा जत्रो भाँडो लिएर गयो, त्यातिनै पनि आउँछ । सानो भाडो छ भने पानी धेरै खोजेर हुदैन ।
माईला काका : तिमिहरुको कुरा पनि ठीकै हो । तर ,
मैले भने : हैन काका तपाईलाई झट्ट हेर्दा अनौठो लागेको हो । लगानी विना आम्दानी हुदैन । सोच्नोस् त हामीले कुटानि पिसानि मात्र भनेर बसेका भए आज डिलर वन्थ्यौं ?
कान्छा काका : हो माल्दाई, यो डिलर खोल्दा आफ्नै जग्गा किनेर घर वनाउनु पनि त झट्ट हेर्दा त अनौठो नै लाग्थ्यो नि । तर ठुल्दाईले त्यसै त्यस्तो गर्नुभा हैन रहेछ । अहिले हेर्नुस् त आफ्नै घर नहुने व्यवसायी कस्तो चपेटामा परेका छन् ।
माईला काका : त्यो त हो । कतिपय कुरामा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि हुन्छ ।
मैले भने : अप्रत्यक्ष सम्वन्धको कुरा मात्र हैन काका, यहाँ त हाम्रो सोच नै सकारात्मक र ठुलो वन्न सकेको छैन । सुन्नोस् काका, हाम्रो तराईमा पहिलानै एउटा मान्छेले घर छाएछ । ४/५ वर्ष पछि छानो मकाएछ । त्यो मान्छेले पहिला घर छाएकै कामदारलाई पुन घर छाउन बोलाए छ । कामदारले घरको धुरी उधार्दै जाँदा सर्पको काँचुली भेटेछ । त्यो कामदारले पहिला त्यो घर छाउँदा आफ्नो खुट्टामा रगत आउन्जेल घोचेको सम्झेछ । कामदारले त्यो घोचाई अरु केहीको नभएर यही सर्पले डसेको सोँचेछ । हर समय त्यही कुरा सम्झदा सम्झदै त्यो कामदार केही दिनमा मरेछ । डाक्टरले चेक गर्दा त उसको शरीरमा सर्पको बीष पो भेटिए छ । त्यसैले सोच जस्तो राख्यो नतिजा पनि त्यस्तै आउछ काका ।
माईला काका : लु हो भने हो त अब, जंगार पनि तर्नु छ, खुट्टो पनि कमायर भएन । के के गर्ने त लु भन ? आखिर हामिले नै गर्ने हो ।
साइला काका : एउटा घर गतिलो वनाउ, यो वन्दावन्दिमा सकिन्छ पनि । अस्ति कान्छाले किनौ भनेको गाडी पनि लिउँ, हैन त कान्छा ?
कान्छा काका : घर भन्नाले नाम मात्रको घर बनाएर पनि हुँदैन । व्यवसायीको जस्तो देखिने गरी व्यवस्थित वनाउनु पर्छ ।
मैले भनें : त्यसको जिम्मा म भए काका, मलाई घर डेकोरेसनको राम्रो आइडिया छ । परिवारको संख्या अनुसार घर ठुलै बनाउनुपर्छ । वैठकमा राम्रोसँग डेकोरेसन गर्नुपर्छ, पछि व्यवसायी डिल बैठकमानै गर्ने गरी । सोफा, बत्ती र भित्ताको कलरमा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । अनि कौसि व्यावस्थापन, आउट लुक्स, गार्डन् पनि आकर्षक वनाउनु पर्छ । आँगनमा पार्किङ गार्डनमा आराम गर्ने ठाउँहरु बिशेष ध्यान दिएर वनाउनु पर्छ ।
हाम्रो त्यो साँझको गफ निकै महत्त्वपूर्ण वन्यो । घर वनाउने कुराले तिव्रता पायो । हुनत बाबा मान्नु भएको थिएन । तर काकाहरु र मैले चेपेपछि ल पनि भन्नू भएन, नाई पनि भन्नू भएन । माईला काकालाइ तँ कहिले पाको नहुने भइस् भनेर टिप्पणी गर्नु भयो । तर त्यसले घर वनाउन कुनै रोक ल्याएन । कान्छा काकाले र मैले घर वनाउने कुरालाई तिव्रता दियौं । पुर्व योजना अनुसारनै घर तीनतले वनाइयो । बैठक, कौसि, आँगन र फुलबारी आकर्षक ढंगले व्यावस्थापन गरियो । लगभग वन्दावन्दि भित्र घरको सम्पुर्ण काम सकियो ।
बन्दाबन्दी खुलेपछि एक प्रकारले नयाँ युगको सुरुवात जस्तो वन्यो । हाम्रो जीवन पनि रचनात्मक ढंगले नवीन वनेको थियो । व्यवसायमा ३ जना काकाहरु संग म पनि सकृय वनें । कान्छा काकाको इच्छा मुताविक गाडी पनि खरिद गरियो । हाम्रो परिवारको जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनले ठुला व्यापारीमा समेत चिया गफमा स्थान पाउन थाल्यो ।
कान्छा काकाले पनि ती कुराहरु गाइगुइ सुन्नु भएछ । एकदिन मलाई भन्नुभयो राजु देखिस् नगरे केही हुदैन, गरे सबै हुन्छ । अहिले चिया गफमा पनि हाम्रा कुरा हुन्छन् । अब हाम्रो दिन खुले । दिन शनिवारको थियो । व्यवसाियक हिसाबले फुर्सदको दिन, सबै घरमै थियौं । कान्छी काकीले बैठक रुममानै चिया ल्याउनुभयो । कान्छा काकाले ह्या नखाने चियासिया, यहाँ टाउको फुट्न लागिसक्यो भनेको बाबाले पुलुक्क हेर्नुभयो ।
बाबा : के भयो तलाइ ? किन जरक्क गरेको ? ल्याएको थपक्क पक्रेर खान छाडेर ?
साच्चै यो शनिबार हाम्रा लागि अन्य शनिबार झैं सामान्य थिएन । भोलि आईतबार गाडीको पैसा बुझाउनु पर्ने थियो । परिवारको ईतिहासमै पहिलोपटक आर्थिक मन्दि आएको थियो । काकाले त्यही कुरा बाबालाई भन्नुभयो ।
बाबा : मैले तिमिहरुलाई पहिला भनेकै होनि , सबै एकमुख लागेर मलाई जित्यौ । भएको पैसा घर वनाउदै सक्यौं, अब अहिले यस्तो अवस्था आयो ।
माईला काका : घरपनि वनाउनै पर्ने थियो नि दाजु, अरु व्यापारीको घर हेर्नुस त, जीवनशैली हेर्नुस त, कस्तो छ ?
बाबा : तिमिहरुले भनेको कुरा मैले बुझेको छु माइला, तर उनिहरुको घर ठूलो भएर, महंगो गाडी चडेर व्यवसाय सफल भएको हैन । कस्तो काँचो बुद्धि तिमिहरुको, अरुको नक्कल गर्ने वहानामा त्यस्तै घर, त्यस्तै वल्व, त्यस्तै रंग, त्यस्तै सोफा, त्यस्तै बैठक रुम र वेडरुम वनायौं । तर त्यसको व्यवसाय संग कुनै सम्बन्ध छैन भन्नेकुरा बुज्न सकेनौं ।
बाबा : (कुरा थप्दै) यो देश चलाउने र तिमिहरु मलाई उस्तै लागिरहेको छ । देश चलाउनेहरुले मुलुक विकास गर्न भनेर विकसित देशका कला, धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा, जीवनशैली नेपाल भित्राए । तिमिहरुले ठूला व्यापारीका घर, बंगाला र गाडी भित्रायौ । तर न त तिनिहरुको विदेशीको जीवनशैली नक्कल गरेर मुलुक विकास हुने कुरामा केही सम्बन्ध छ । न त तिमिहरुले चलेका व्यवसायीको घर गाडी नक्कल गर्नुसंग व्यवसाय फस्टाउने कुनै सम्बन्ध छ ।
बाबाको कुराले मेरो मनमा पनि चिसो पस्यो । ओ हो ! बाबाको छेउमा त हामी कति कच्चा रहेछौं । साच्चै पढाइ र व्यवहार त एकै नहुने रहेछ । मैले अहिले नै निर्णय गर्ने हैसियत वनाएको रहेन छु । धेरै कुरा सिक्न वाँकि रहेछ।
बाबा : (पुन लामो सास लिँदै ) मुलुकले सामाजिक सभ्यता र विकासको सम्बन्ध हुदैन भन्ने कुरा बुझेन । त्यसैले नमस्कार गर्ने चलनलाई विकासको वाधक ठान्यो । अंकमाल गर्ने सभ्यता विकास गर्याे । नेपाली पोषाक लगाउनु विकासको वाधक ठान्यो र विदेशी पोषाक लगाउने अभ्यास सुरु गर्याे । विहान बेलुका पाञ्चायन पुजा गर्नाले विकास नभएको सम्झिए र विदेशी धर्म संस्कृती भित्रायो । अब यो देशनै विकास नहुने खाल्को रहेछ भनेर अर्को देशलाई दिन वेर छैन । तिमिहरुको पनि त्यस्तै भयो । यो घरले व्यवसाय नफस्टाएको ठानेर अर्को घर वनायौं । सामान्य वल्व बाल्दा व्यवसाय फैलाएन भनेर महंगो वल्व वाल्यौ । ठूला व्यापारीको झैं खाने वस्ने प्रणालिको विकास गर्याै । तर व्यवसायमा यसको कुनै सम्बन्ध थिएन भाइ हो । खै यो समयनै यस्तै आएको त होला नि ।
साइला काका : हिजो जे भो, सकियो । अब के गर्ने त ठुल्दाई ?
बाबा : अब यो व्यवसाय गर्ने लगानी घरमा लगायौ । तिरो भरो गर्नुपर्ने पनि निकै भयो । यो व्यवसाय विक्रि गर अनि तिरोभरो गर्देउ । त्यसपछि कति पैसा वच्दछ, त्यहि अनुसारको के व्यवसाय गर्नु म त्यतिबेलै भनौला । लु तनाव नल्याओ, तनावले आफैलाई सक्छ । भन्दै बाबा बैठकबाट बाहिरिनु भयो ।